Weeraro Xoogan Oo Laga Cabsi Qabo Iney Ka Dhacaan Kenya Iyo Iskuulo Badan Oo Albaabada La Iskugu Dhuftay – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Weeraro Xoogan Oo Laga Cabsi Qabo Iney Ka Dhacaan Kenya Iyo Iskuulo Badan Oo Albaabada La Iskugu Dhuftay
Wararka ka imanaaya dalka Kenya ayaa sheegaya in ciidamada amaanka ay xireen dhowr Iskuul oo ku yaal deegaanka Laamu ee dalkaasi cabsi laga qabo in ay Alshabab ka geystaan weeraro gudaha deegaankaasi.
Afhayeen u hadlay ciidamada amaanka deegaanka Laamu ayaa sheegay in ay heleen xogo ku aadan in Al shabaab ay weeraro ka geysan rabaan gudaha deegaankaasi gaar ahaan goobaha waxbarashada,xarumaha caafimaadka magaaladaasi.
Sidoo kale waxuu sheegay in haatan shan Iskuul ay xireen halka kol hore ay albaabada isugu dhufteen iskuulo ku yaala deegaankaasi.
Laamaha Sirdoonka Kenya ayaa dhanka kale sheegay in xubno katirsan Al shabaab ay haatan kusugan yihiin gudaha dalkaasi isla markaana ay kacabsi qabaan in ay weeraro dhiig badan ku daata ay kageystaan gobalada dalka Kenya.
Inka badan 260 arday oo dhiganeysay iskuulka Mokowe oo ku yaala deegaanka laamu kaa oo la’aas aasay sanadii 1992dii ayaa waxaa la sheegay in ay u suuragali weysay in Arday daasi ay u wareejiyaan iskuulada kale maadaama tirade macalimiiinta ay aad u liidato sida uu sheegay ku xigeenka gudoomiyaha deegaanka Laamu.
Tan iyo sanadii 2011kii Kenya ayaa lugaha la gashay Amni daro xoogan kadib markii ciidamada difaaca Kenya ay Soomaliya usoo talaaben kuwaa oo dowlada Soomaaliya, ka taageeraya la dagaalanka Dagaalyahanada Alqaacidda garabka Soomaaliya.